माता लक्ष्मी समान हुने गर्छन् यी राशिका महिला, कतै तपाईं नि पर्नुभयो कि ? | सुदुरपश्चिम खबर
माता लक्ष्मी समान हुने गर्छन् यी राशिका महिला, कतै तपाईं नि पर्नुभयो कि ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ 19
फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ।ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशि भएका स्त्री जो सफल छोरी र बुहारी हुने गर्दछन्।
शास्त्रमा त्यस्ता युवतीलाई लक्ष्मीका रुपमा तुलना गरिएको छ। यी राशिका युवती निकै खास हुने गर्दछज्।जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितीको पनि उनीहरु सामना गर्न तयार हुन्छन्। कडा मेहनत र परिश्रमले यिनीहरुको जीवन सफल र सुखी हुने गर्दछ। यस्ता राशि भएका स्त्रीले परिवारलाई सुख, शान्ति दिनुका साथै धन र सम्पन्नतामा पनि वृद्ध गराउछन्।
ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा बुहारी बन्न सक्छन्।कुन कुन हुन् ती राशि ? हेर्नुहोस् ‘
कन्या राशिः कन्या राशि हुने महिलाहरु शान्त स्वभावका हुन्छन्। कुनै पनि विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। कलह देखि पनि कन्या राशिहुनेहरु टाढा रहन रुचाउँछन्। जसकारण बुहारीको रुपमा कन्या राशि हुने युवतीहरु उदाहरणनै बन्न सक्छन्।
परिवारको हरेक कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाउने हुँदा परिवार खुशी रहन सक्छ। आर्थिक मामिलामा पनि कन्या राशि हुने बुहारीहरु बुद्धिमानी मानिन्छन्।
मीन राशिः मीन राशि हुने बुहारीहरु पनि उत्कृष्ट मानिन्छन्। उनीहरु आफू भन्दा पनि परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छन्।
परिवारमा आइपर्ने दुख माथि उनीझरुको विशेष निगरानी रहने गर्छन् दुखको समयमा परिवारलाई उचित सल्लाह दिन्छन्। यति मात्र नभई उचित कदम चाल्न सक्ने समेत यस राशि हुने बुहारीहरुमा क्षमता हुन्छ। बाहिरी उकसाहटमा कुनै पनि कदम चाल्नु अगाडी धेरै सोच्ने हुँदा पनि मीन राशि हुने बुहारीहरु लक्ष्मी समान हुन्छन्। gnewsnepal.com बाट सभार